02 Jun 2007.
Wiilal CGI ay Dhagaxbuur ku laayeen oo maydkooda jidka la dhigay.
Itoobiya oo sheegtay inayna Soomaaliya ka bixin doonin.
Midowga Afrika oo NATO ka codsaday inuu ka caawiyo nabadgelyada Soomaaliya
Jaaliyada Ogadenya ee magaalada Musawac oo u dabaal dagtay sanadguuradii 6aad ee aas-aaskeeda.
Waraysiyo qaar kamid ah madaxda Jabhada(N/Hurayaal,C/nuur Sooyaan,Cabdi Cabdullahi iyo Axmed Sanweyne).
Wararaka naga soo gaadhaya Magaalada Dhagaxbuur ayaa sheegaya in Ciidamada gumaysiga Ethiopia ay Magaalada ku dileeny 4 wiil oo shacab ah. Dilka wiilashan shacabka ah ayaa lala xiriirrianayaa qarax aan la garaneynin cida ka dambaysay oo ka dhacay magaalada Dhagaxbuur isniintiii lasoo dhaafay.
Qaraxaas kadib ayay ciidamada gumaysiga Ethiopia ee ka howlgala magaalada Dhagaxbuur dad shicib ah ka buuxiyeen xabsiyada, dadkaas oo aad u tiro badnaa ayaa hadaba ciidamada gumasiga ee magaalada Dhagaxbuur habeenkii khamiista ahayd ku gawraceen 4 nin oo shicib ah oo ka mid ahaa dadkii loo taxaabay xabsiyada.
Sida uu noo xaqiijiyay Wariyaha Radio Xoriyo ee magaalada Dhagaxbuur ayaa mar aan khadka Telefonka kula xidhiidhnay wuxuu noo sheegay inuu indhihiisa ku arkay 4ta ruux ee shicib ka ah ee la gawracey oo maydkooda suuqa lasoo dhigay kadibna loo diiday inay aastaan eheledoodu.
Warku wuxuu intaas ku daray inay ciidamada gumaysiga Ethiopia u fiirsanayeen cida ay u maleeyaan inay eheliyadooda tahay ee ay ka dareemaan mooraal xumo kadibna ay u taxaabayeen xabsiga.
Ilaa iyo hada ma hayno magacyada dadkaasi la laayay waana idiin soo gudbin doonaa marka aan sugno magacyadooda oo buxa.
Si kastaba aha ahaatee xaalada wadanka Ogadenya ayaa ah mid haatan aad u qalafsan. Dhinaca kale, wariyeyaasha Radio Xoriyo ayaa ku hawlan sidii ay usoo tiro koobi lahaayeen dadka dhaawacyadu ka soo gaadheen iyo dhimashada Ciidamada gumaysiga Ethiiopia iyo kuwa aan laga warqabin meel ay ku suganyihiin geeri iyo nolol midna.
Dhinaca kale Wararka naga soo gaadhaya magaalada Awaare ayaa sheegaya in xabsiga loo taxaabay Hooyo Dheeraad Biixi oo ganacsato ah iyo wiil keeda Rashiid Xaaji Yuusuf. sababta loo xidhay hooyo Dheeraad ayaa ahayd kadib markii uu wiilkeeda Rashiid safar kaga yimid magaalada Hargaysa oo uusoo galay mgaalada Awaare xilli ay magaaladu bandow kujirtay.
Itoobiya oo sheegtay inayna Soomaaliya ka bixin doonin
Wasiirka arrimaha dibada ee gumaysatada Itoobiya Seum Mesfin ayaa sheegay in ciidammada dalkiisa ee ku sugan Soomaaliya ayna marna dalka Soomaaliya ka bixi doonin, inta ay ka hubsanayaan inay dabar-jareen xoogaggii maxkamadaha iyo waxa uu ugu yeedhay argagixisada caalamiga ah ee Soomaaliya ka hawlgasha.
Mesfin wuxuu arrintan kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho mar uu booqasho qarsoodi ah ku tagay horraantii toddobaadkan.
Mesfin isagoo arrintaas ka hadlaya wuxuu yidhi; �Masuuliyiin badan oo soomaali ah, bulshada rayadka ah iyo madax dhaqameedyaduba waxay naga codsadeen in aanaan ciidamadayada kala bicixn dalka Soomaaliya, wuxuuna nagu dhiirri galiyeen inaan marka hore hubino in Soomaaliya laga baabi�iyay taageerayaashii maxkamadaha iyo argagixisada caalamiga ah�.
Wuxuu kaloo intaas raaciyay in ciidammada Itoobiya ayna Soomaaliya ka bixi doonin, inta ay ka hubsanayaan in duullaankii ay Soomaaliya ku qabsadeen uuna noqonin mid lagu guul darraystay. Wuxuu kaloo sheegay in Itoobiya ayna marna aqbali doonin in kooxaha islaamku ay dhexgal ku sameeyaan dowlada ama buslahada soomaaliyeed.
Hadalka Mesfin wuxuu daboolka ka qaadayaa ujeedadii dhabta ahayd ee Itoobiya u qabsatay dalka Soomaaliya, iyadoo markii hore ku andacoon jirtay inay Soomaaliya sida ugu dhakhsaha badan uga bixi doonto, ayay hadda caddaysatay qorsheheeda ah inay si rasmi ah u gumaysato dalka Soomaaliya.
Isbahaysiga NATO ayaa ka baaraan-degaya codsi kaga yimid dhinaca Midowga Afrika oo ku saabsan in isbahaysiga NATO uu gacan ka gaysto gaynta ciidammada Midowga Afrika gaynayo dalka Soomaaliya, sidaas waxaa arbacadii sheegay saraakiil ka tirsan Isbahaysiga NATO.
Midowga Afrika ayaa Isbahaysiga NATO u gudbiyay codsi ku saabsan in gacan iyo talabixinba laga siiyo sidii ciidamo nabad ilaalineed loo gayn lahaa Dalka Soomaaliya.
Sargaal u hadlay Isbahaysiga NATO ayaa daboolka ka qaaday in xubnaha NATO ay isku khilaafsan yihiin wixii codsigaas laga yeeli lahaa. Sargaalkani wuxuu intaas ku daray in xubnuhu ayna isku aragti ka ahayn jawaabta codsigan laga bixinayo, hase yeeshee wuxuu intaas raaciyay in Isbahaysiga NATO uu fahmi karayo codsiga uu Midowga Afrika u soo gudbiyay, isla markaana uu codsigani la mid noqon karo taageerada uu Isbahaysigu u fidiyo hawlaha nabad ilaalineed ee Midowga Afrika ka wado gobolka Darfur oo Isbahaysiga NATO uu gacan ka gaysto.
Codsigan ayaa hadda loo gudbiyay guddiga arrimaha millatariga ee Isbahaysiga, kaasoo diyaarin doona qorshe ku aaddan sida ugu habboon ee NATO uga caawin karto Midowga Afrika ciidammada nabad ilaalinta loo gaynayo dalka Soomaaliya.